ukuxhaswa kwezixuku Ingobo yomlando - Amalungelo Abantu & Art Light by ∴ PixelHELPER Foundation
23 -Feb 2019
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 23. Februwari 2019
Ukudiliza nama-2 bulldozers asembusweni
Kusukela kudilizwa isikhumbuzo sethu sokuQothulwa Kwesizwe esizwa kuzo zonke izinhlangothi ukuthi akekho umJuda owashona eMorocco, kwakukhona amakamu okufukuzwa kuwo amathrekhi ezitimela neminye imikhiqizo yezimboni. Ukusebenza kuze kube sekufeni. Ukubhujiswa ngomsebenzi. Le ngxenye yomlando weMoroka ayikakenziwa, ngakho-ke iSikhumbuzo sokuQothulwa Kwesizwe kumele sakhiwe kabusha yisimo saseMoroccan ukwethula lolu lwazi.
Imininingwane engalungile kwabezindaba zeMoroccan
Sincenga labo ababhekele izinkampani zemidiya ezithintekile ukuthi baphrinte impendulo yethu neqiniso. Indawo ye-PixelHELPER eMorocco kwakungukudala izindlela ezisebenzayo zosizo losizo lwabantu kanye namaphrojekthi wezobuciko - lapha ezakhiweni zethu - ngesoftware esetshenziswayo eyenziwe nsuku zonke neyenziwe nsuku zonke esethula ku-TED Talk eMarrakech. Ngokungezelela epulazini le-algae, ibhikawozi lesinkwa esenziwe okheniweni kanye nokuthunga imisebenzi yabantu, sakha nendawo yokwakha ubuciko ngekhophi yomngcele wangaphandle we-EU, isikhumbuzo sosizi oluncane olushushisiwe lwazo zonke izinkolo kanye nemifanekiso yombhoshongo we-Orthanc #HerrderRinge. Yonke le misebenzi yenziwa ngokusobala ekusakazweni bukhoma phakathi kukaSeptemba 2018 no-Agasti 2019. Ngokwengxenye egqokwe ku-Lord of the Rings Cosplay noma i-Concentration Camp dress. NgoSepthemba, sangenisa i-2018 isicelo semvume yengadi yethu ngokufakwa kobuciko okungakaze kuhlelwe ngoba iMeya ingasinaki unyaka we-1. Lapho sibona ukuthi akukho ukuxhumana, saqala ukusebenzisa iphrojekthi yethu. Amaphephandaba athi izinto ezingalungile, njenge: Amanzi Okuvuza: Awukwazi ukweba amanzi ngomthombo wakho futhi ungaxhumeki kunethiwekhi yamanzi yendawo. Ngokuphambene nalokho, lapho ibhilidi lamanzi lale ndawo liphulwa wonke lo muzi, isikebhe sethu ngaphandle sasingangezinsuku sikhonza izakhamuzi. IStromklau: Sasinezikweletu zikagesi eziphezulu ezivela ku-200-300 € ngenyanga, asikaze sintshontshwe ugesi. Ukuxhaswa ngezimali kwePixelHELPER eminyakeni yamuva nje kuxhaswe ngemali eyi-15% ngonyaka ngeminikelo nange-85% kusuka emisebenzini lapho uPixelHELPER ehlinzekele ukukhanyiselwa okulula kwezinye izinhlangano. Lokhu kusho ukuthi noma sicela imali kwihhovisi ngalinye leposi, umnyombo oyinhloko wokuxhaswa ngezimali ukuqagela okulula kwabavela eceleni. I-PixelHELPER ayikaze ibize iMoriya ukuthi ilwa namaJuda kodwa yafuna ukudala iSikhumbuzo kubaJuda ababulawa, iSinti & Roma, i-Uyghurs ... njengendawo yomphakathi yokuqoqa imininingwane yamasiko kanye nomlando. Umsunguli wePixelHELPER uvezwa kwabezindaba zeMorocan njengobungqingili, kodwa ubelokhu ethandana ngokuphelele nowesifazane waseBrazil iminyaka eminingana. Asikaze sisebenzise izingane, kodwa sihlinzeke izingane ezihlupheka endaweni eziseduze ngezingubo zamahhala, imali, amabhayisekili, izigqoko, namanye amathokheni, futhi sinemigomo yenkundla yebhola. Izinsolo zokuthi sifuna ukudala u-Israyeli wesibili eMorocco, awunawo amaqiniso. Ukugxeka kwamaMoroccans ngeFreemasonry nakho akunasisekelo njengoba iLodge 1867 yokuqala yasungulwa eTangier. Kukhona nendawo yokuhlala yabesifazane engenacala eMorobha. Thina ngokwethu besingakaze sihlangane neMoroccan Masons noma senze umsebenzi wokuhlala. Inhlangano yethu iphoxekile ngeziphathimandla zaseMorocco ezikubonile nsuku zonke ekusakazeni okubukhoma esikwenzayo lapha. Siphinde sichaze njalo lokho esikuhlelayo futhi sikusebenzise kwikomkhulu lethu le-PixelHELPER live. Ukuthi bonke abantu bangaphandle abaziqondi kahle lezi zenzo, ababoni ubuciko, abazi ukuthi usizo lwesimanjemanje lwesasizo ngokusebenzisa imithombo yezokuxhumana futhi besaba ukuthi freemasonry olungenasilo akulona iphutha lePixelHELPER kepha lusekelwe emfundweni yabo ngezihloko. Wonke umuntu angathola imininingwane. Njengoba sikubona kuphila ku-inthanethi nsuku zonke, bekuzoba ngumsebenzi kahulumeni waseMoroccan ukuthi ube nezingxoxo nathi ebesilokhu sizinikeza. Bonke othintana nabo bebengaphendulwanga. UPixelHELPER ubhale kabili wonke amalungu ePhalamende laseMorocco nge-imeyili. Onke amalungu e-CORCAS athole ama-imeyili amaningi. Zonke izithunywa zeMoroccan emhlabeni zivame ukuthola imininingwane kithi. Isisebenzi senxusa leMorocan eSweden sasihlala saziswa ngalo msebenzi. Amaphephandaba akhononda ngesithombe se-cosplay lapho abasebenzi bethu begqoke khona izindandatho #herring kukhombisa isimo esibuhlungu. I-Merkel rhombus ebibunjiwe ngezandla yathunyelwa yithina njengesithombe se-cosplay ehlekisayo futhi ayinasizinda sangempela se-Masonic. Ngokudilizwa, i-obelisk yethu yaba ngomufi #TombiaBraide ichithwe, umthwalo wethu wekhamera yemitha ye-15 & - ichithwe ngamabomu ngamawaka ambalwa ama-euro wamandla & wiring yenethiwekhi. Zonke lezi zitatimende ziyaqinisekiseka. Icala alikho kuPixelHELPER kepha ngomgodi wokuxhumana weziphathimandla zaseMoroccan. Ngaphambi kokuqala iphrojekthi eMorocco ngonyaka we-2014, u-Oliver Bienkowski wazise yena uqobo inxusa laseMorocco eliseBerlin ngayo yonke imisebenzi ehlelekile.
Amakamu okufukuzwa kuwo aseBou Arfa Isikhumbuzo sokuQothulwa Kwesizwe eMorocco Okthoba 10th, i-2019Oliver Bienkowski